Udumo lodonga lwe-Android | I-Androidsis
Khuphela okona kulungileyo odumileyo kunye nodumo wallpapers ye-Android yakho. Yenza i-mobile yakho okanye ithebhulethi yakho ngezinye zeenkwenkwezi ezidumileyo zomzuzu, eyona nto uyithandayo?
Yenza ngokwakho ifowuni yakho ye-Android kunye nezona wallpapers zineenkwenkwezi ezidumileyo zanamhlanje. Ukusuka kwiimvumi zakho ozithandayo, abadlali beqonga okanye abadlali beqonga kwiimodeli ezintle kakhulu kwihlabathi. Unokuba nesithixo sakho njengephepha lodonga ngendlela elula kakhulu kwaye ngaphandle kwendleko.
Khetha inkwenkwezi yakho oyithandayo kolu khetho lubanzi lweemvelaphi ezikhoyo kwigalari. Ukuthatha umlingisi wakho oyithandayo okanye imvumi kunye nawe ngoku kubulela ngokulula kuzo zonke ezi wallpapers ze-Android.
Apha ngezantsi unegalari ene iimifanekiso zethebhulethi okanye iselfowuni ukubeka uphawu oluthandayo oludumileyo njengemifanekiso yamaphephadonga.
Kumfanekiso, umdlali weqonga uOlivia Wilde.Olivia Wilde wefilimu «Cowboys & Aliens» eLos Angeles, California ngomhla we-17 kuJulayi ngo-2011. © Armando Gallo / Retna Ltd. *** NO TABS / SKIN MAGS *** *** NO ITALY *** AKUKHO JAMANI *** AKUKHO UK *** AKUKHO FRANCE *** AKUKHO ZOKUTHENGISWA KWE-AMI UPAPASHO